उत्तम सस्तो ल्यापटपहरू - हामी तपाईंलाई बचत गर्न मद्दत गर्छौं
€ 500 भन्दा कम
€ 1000 भन्दा कम
€ 1000 भन्दा कमको लागि गेमिङ
पैसाको लागि उत्तम मूल्य
कुन ल्यापटप किन्ने ?
Ryzen5ल्यापटप
Ryzen7ल्यापटप
कुनै अपरेटिंग प्रणाली छैन
अति पातलो नोटबुक
उत्तम सस्तो ल्यापटप
हामी सस्तो ल्यापटपहरूलाई विशिष्ट विशेषताहरू अनुसार तुलना र विश्लेषण गर्छौं ताकि तपाईंले गुणस्तर र मूल्यमा उत्कृष्ट पाउन सक्नुहुन्छ।
सस्तो ल्यापटपमा आजको डिलहरू
सस्तो ल्यापटप किन्नु भनेको कार किन्नु जस्तै हो। तपाईंले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुपर्छ र घर लैजाने प्रतिबद्धता अघि दस मध्ये नौ पटक तपाईंले यसलाई "स्पिन दिनुहोस्" आवश्यक छ, किनकि तपाईंको छिमेकीको लागि सही कुरा तपाईंको लागि सही नहुन सक्छ। तपाइँ कुन मोडेल चाहानुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नु अघि, तपाइँ यसको लागत र तपाइँसँग भएको बजेट विचार गर्नुपर्छ।.
तपाईंको राहतको लागि, हामीले यस लेखमा भेला भएर कामको सबैभन्दा कठिन भाग गरेका छौं सबै भन्दा राम्रो सस्तो ल्यापटप। हामीले प्रत्येक आवश्यकताको लागि एउटा मोडेल समावेश गरेका छौं, त्यसैले तपाईले यसलाई केको लागि प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने फरक पर्दैन, तपाईले पक्कै पनि तपाईको लागि एक आदर्श फेला पार्नुहुनेछ।
MSI आधुनिक १ ... ...
HP 15s -eq2121ns -...
यदि तपाइँ अझै पनि तपाइँलाई कुन सस्तो ल्यापटप चाहानुहुन्छ थाहा छैन भने, तल तपाइँसँग खरिद गाइडहरूको एक श्रृंखला छ जुन तपाइँले खोज्नु भएको सुविधाहरूमा आधारित छनोट गर्न मद्दत गर्दछ:
मूल्य अनुसार ल्यापटप
उत्तम ल्यापटप गुणस्तर मूल्य
1000 यूरो भन्दा कमको लागि गेमिङ ल्यापटप
1000 यूरो भन्दा कम को लागी ल्यापटप
500 यूरो भन्दा कम को लागी ल्यापटप
प्रोसेसर द्वारा ल्यापटप
प्रकार अनुसार ल्यापटप
लिनक्स ल्यापटप। कुन किन्ने?
SSD संग ल्यापटप
2-in-1 परिवर्तनीय ल्यापटपहरू
गेमि lapt ल्यापटपहरू
अपरेटिङ सिस्टम बिना ल्यापटप
ब्रान्ड द्वारा ल्यापटप
सर्वश्रेष्ठ ल्यापटप ब्रान्डहरू
Toshiba Dynabook नोटबुक
स्क्रिन अनुसार ल्यापटप
13 इन्च ल्यापटप
14 इन्च ल्यापटप
15 इन्च ल्यापटप
17 इन्च ल्यापटप
ल्यापटपलाई तपाईले चाहानु भएको प्रयोग अनुसार दिनुहोला
ग्राफिक डिजाइन को लागी ल्यापटप
भिडियो सम्पादनको लागि पोर्टेबल
बच्चाहरु को लागी पोर्टेबल
प्रोग्रामिङको लागि पोर्टेबल
काम गर्न पोर्टेबल
विद्यार्थीहरूको लागि ल्यापटप
€ 500 र € 1.000 को बजेटको साथ, यो तुलनाले तपाईंलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ।
यदि तपाइँसँग किन्ने कक्षा छैन भने, हामीले तपाइँलाई एउटा बनाएका छौं पूर्ण गाईड ताकि तपाइँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ के ल्यापटप किन्न लिङ्कमा क्लिक गरेर।
२०२१ को उत्कृष्ट सस्तो ल्यापटपहरू
ठिक छ, थप विज्ञापन बिना, २०२१ को सबै भन्दा राम्रो सस्तो ल्यापटपहरूबाट सुरु गरौं। सूची बनाउनको लागि, हामीले मूल्य मात्र होइन डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरूलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं र धेरै धेरै पक्षहरू।
हामीले थोरै तल फेला पारेको उत्कृष्ट प्रस्तावलाई हेर्नुहोस् किनभने यो मोडेल निश्चित रूपमा विचार गर्न लायक छ, यस कारणले हामीले यसलाई पहिलो स्थानमा राखेका छौं। यो पातलो र मौन नोटबुक हो। यो सम्भवतः दोस्रो ल्यापटपको रूपमा वा विद्यार्थी र पेशेवरहरूको लागि कार्य ल्यापटपको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईले तिर्नु भएको कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईले गति वा उपयोगिताको अपेक्षा नगर्नु राम्रो हुन्छ। यद्यपि, यस सूचीमा सस्तो ल्यापटप भए तापनि, यसले केही राम्रा प्रभावशाली सुविधाहरू प्याक गर्दछ।
CHUWI हीरोबुक १.14.1.१ '...
सबैभन्दा प्रभावशाली यसको 64 GB हो, यो एक उत्कृष्ट सुविधा हो जुन हामीले यस सूचीमा समावेश गरेका अधिकांश ल्यापटपहरूमा कमी छ। तपाईंले CHUWI HeroBook बारे सोच्नुपर्छ जस्तै Microsoft को Chromebook को जवाफ। यदि तपाइँ क्रोमको अपरेटिङ सिस्टमसँग मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्न र Windows 10 प्रयोग गर्ने बानी हुनुहुन्छ भने, यो Microsoft को सबै भन्दा राम्रो सस्तो ल्यापटपहरू मध्ये एक हो।
यो कम्प्युटर यो बरु हल्का दैनिक प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त हुनेछ: इन्टरनेट सर्फ गर्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट अफिस प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै वर्ड र एक्सेल), सामाजिक नेटवर्कहरू नियन्त्रण र अद्यावधिक गर्नुहोस्, स्ट्रिमिङ भिडियो सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् ...)
यो सूचीमा सबैभन्दा सस्तो ल्यापटपहरू मध्ये एक हो, तर यसको मतलब यो शक्तिशाली छैन भन्ने होइन। दैनिक प्रयोगको लागि यसले तपाईंलाई प्रदान गर्नेछ धेरै लामो ब्याट्री जीवन, छिटो प्रशोधन र तपाइँ साधारण भिडियो गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ (थप जटिलहरूका लागि यो छोटो हुन्छ तर यदि तपाइँ बच्चाको लागि ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो एक उत्कृष्ट विकल्प हो, मलाई विश्वास गर्नुहोस्)।
हाम्रो अनुभवमा, यस ल्यापटपको मुख्य कमजोरी यो हो कि यसमा DVD ड्राइभ छैन। जे होस्, यो मूल्य दायरामा ल्यापटपहरूको लागि यो सामान्य बन्दै गएको छ, त्यसैले यसले तपाईंलाई छोड्न नदिनुहोस्, किनकि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने धेरै सफ्टवेयर, जस्तै Microsoft Office, डाउनलोडको रूपमा किन्न सकिन्छ। , कुनै डिस्क छैन। यद्यपि, यदि यो साँच्चै तपाइँको लागि असुविधा हो भने, तपाइँ 30 यूरो भन्दा कमको लागि बाह्य DVD ड्राइभ किन्न रोज्न सक्नुहुन्छ।
त्यो बाहेक, यसको स्क्रिनको ठूलो साइज, यसको गुणस्तर र माथि उल्लिखित विशेषताहरूका कारण, यो तंग बजेट को लागी एक महान ल्यापटप हो।
ASUS Vivobook 15,6 इन्च HD
Asus VivoBook सम्भवतः छ यस सूचीमा दैनिक प्रयोगको लागि सबै भन्दा राम्रो सस्तो ल्यापटपहरू मध्ये एक। यो Amazon मा एक शीर्ष बिक्रेता भएको छ, र यसको मूल्य दायरामा अन्य ल्यापटपहरु संग तुलना गर्दा, हामी सजिलै किन देख्न सक्छौं।
हामीले अघिल्लो सूचीमा संक्षेप गरेका विशेषताहरू सबै भू-भाग ल्यापटपको लागि एकदम सामान्य छन्, त्यसोभए के यो विशेष बनाउँछ? खैर, Asus पैसाको लागि अपराजेय मूल्य र HD डिस्प्लेको साथ प्रस्ताव गर्न रोज्यो एकीकृत ग्राफिक्स कार्ड इंटेल HD ग्राफिक्स .०० र v2 Dolby Advanced Audio जसले गर्दा तपाईंले अपेक्षा गरेको सबै गुणस्तरको टिभी वा चलचित्र हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक प्रकारको ल्यापटप हो तपाईं काम र मल्टिमिडिया दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो सबैभन्दा सानो वा सबैभन्दा पोर्टेबल छैन, यो अझै पनि घरबाट बाहिर र बाहिरबाट घरमा लैजान, Windows 10 बाट यसमा काम गर्न, चलचित्रहरू र टेलिभिजनहरू हेर्न वा साधारण भिडियो गेमहरू खेल्न धेरै सजिलो छ। यो के लागत को लागी, म यो हो भनेर पुष्टि गर्छु बजारमा यस मूल्य दायरामा सबै भन्दा राम्रो ल्यापटपहरू मध्ये एक.
यो ल्यापटप अन्य सिफारिस गरिएका भन्दा अलि सस्तो छ, तर हामीले यसलाई जसरी पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेका छौं किनभने अन्य बजेट ल्यापटप गाइडहरूमा यसले यसलाई शीर्ष स्थानहरूमा बनाएको छ, PC सल्लाहकारको 2021 को उत्कृष्ट किफायती ल्यापटपहरूको सूचीमा पनि पहिलो स्थानमा। त्यसोभए, के यो त्यो अतिरिक्त पैसा तिर्न लायक छ वा यो मोडेलको साथ यसको लायक छ?
हामीले HP 14 समावेश गरेका छौं हाम्रो 2021 को सर्वश्रेष्ठ बजेट-अनुकूल ल्यापटपहरूको सूचीमा किनभने तपाईंले यसमा फ्याँक्नुभएको कुनै पनि कुरा लिन सक्छ (इँटा बाहेक) र अलि बढी.
यो माइक्रोसफ्ट अफिस, सामान्य रूपमा वेब ब्राउजिङ, स्ट्रिमिङ भिडियो सेवाहरू जस्ता सबै आधारभूत कार्य अनुप्रयोगहरू मार्फत द्रुत रूपमा उडान गर्दछ र तपाईंलाई भिडियो गेमहरू खेल्न अनुमति दिन्छ (यद्यपि हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि यो त्यसका लागि डिजाइन गरिएको थिएन, यो अलि ढिलो छ र। ग्राफिक्स मध्यम-कम गुणस्तरका छन्)।
यो सबैको लागि, हामी यसलाई विचार गर्छौं यसको मूल्य दायरामा सबै भन्दा राम्रो ल्यापटपहरू मध्ये एक, किनकि तपाइँ यसलाई 300 यूरो भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
लेनोभो Ideapad 530
यस सूचीमा Lenovo Ideapad को उपस्थिति अलि अनौठो छ। यो नोटबुक छ रोटरी एलईडी टच स्क्रिन, पूर्ण HD (1920 x 1080)। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ आरामसँग YouTube भिडियो वा कुनै चलचित्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ यसलाई हेर्ने मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ।
एक हो सूचीमा सबै भन्दा राम्रो प्रोसेसर छ, त्यसैले यदि तपाइँ राम्रो प्रदर्शन खोज्दै हुनुहुन्छ र 2-in-1 परिवर्तनीय ल्यापटपको मजा लिनुहुन्छ भने यो निश्चित रूपमा एक उत्कृष्ट विकल्प हो।
लेनोवो योग 530-14IKB -...
Lenovo Yoga अन्य ल्यापटपहरू भन्दा अलि हल्का छ, तर यो अझै पनि हामीले त्यस सन्दर्भमा तल समीक्षा गर्ने Chromebook सँग मेल खाँदैन। यो ल्यापटपहरू भन्दा धेरै शक्तिशाली छ जुन हामीले अघिल्लो अनुच्छेदहरूमा वर्णन गरेका छौं र, यद्यपि फोल्डिंग स्क्रिन अलि कृत्रिम जस्तो लाग्न सक्छ, यो भनिन्छ कि यसले धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद। स्पर्श हुन। मूलतः यो मोडेल प्याकार्ड बेल इजीनोटको जस्तै उपयोगिता छ, तर केही उत्कृष्ट सुविधाहरू सहित.
तिनीहरूको प्रयोग अनुसार सबैभन्दा सस्तो ल्यापटपहरू
आधारभूत कार्यहरूको लागि:
15,6 "HD स्क्रिन 1366x768 पिक्सेल
AMD A6-9225 प्रोसेसर, DualCore 2.6GHz 3GHz सम्म, 1MB
एप्पल म्याकबुक प्रो (१३...
सेभेन्थ जेनेरेसन इन्टेल कोर.I5 डुअल-कोर प्रोसेसर
उज्यालो रेटिना स्क्रिन
इन्टेल आईरिस प्लस ग्राफिक्स ६४० ग्राफिक्स
LG ग्राम 17Z990-V -...
अल्ट्रालाइट, केवल 1340 ग्राम तौल र यसको ब्याट्री जीवन 19.5 घण्टा सम्म, एलजी ग्राम सबैभन्दा लोकप्रिय 17 "ल्यापटप हो ...
Windows 10 गृह संस्करण (64bit RS3) अझ सहज कार्यसम्पादनको लागि
विस्तारयोग्य मेमोरी, 512 GB SSD मानकको रूपमा2TB सम्म विस्तार गर्न अतिरिक्त स्लटको साथ; ८ जीबी र्याम मेमोरी सहित...
माइक्रोसफ्ट सतह प्रो7-...
१.12.3..2736 इन्च टच स्क्रीन (२२1824x१XNUMX०XNUMX पिक्सेल)
इंटेल कोर i5-1035G4 प्रोसेसर, 1.1GHz
GB जीबी LPDDR8X र्याम
१ मा २:
लेनोवो योग 530-14ARR -...
१ "" स्क्रिन, फुलएचडी 14x1920 पिक्सेल आईपीएस
AMD Ryzen52500U प्रोसेसर, Quadcore 2.5GHz अप 3.4GHz
GB जीबी DDR8 रम, २4०० मेगाहर्ट्ज
खरिद गर्नु अघि सिफारिसहरू
सबै भन्दा राम्रो मूल्य ल्यापटप को लागी एक सामान्य गाइड पछि, तपाइँ केहि अधिक विशिष्ट मा रुचि हुन सक्छ। यस अवस्थामा तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन, हामीसँग धेरै तुलनाहरू छन् जुन तपाईका लागि पनि रोचक हुनेछ।
उत्तम ल्यापटप गुणस्तर मूल्य। केही मोडेलहरूको गुणस्तर र मूल्यलाई अझ राम्ररी तुलना गर्ने थोरै थप विस्तृत तुलना। यदि तपाईं आफ्नो पैसाबाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने विचार गर्न।
गेमि lapt ल्यापटपहरू। खेल खेल्न ल्यापटप किन्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूका लागि। हामीले दुबै चश्मा र मूल्यमा शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरूलाई श्रेणीबद्ध गरेका छौं ताकि तपाईं ग्राफिक्स र कार्यसम्पादनबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुहुन्छ।
सर्वश्रेष्ठ ल्यापटप ब्रान्डहरू। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यहाँ समावेश गरिएका सबै ब्रान्डहरू ज्ञात छन् र त्यसैले उनीहरु चिनियाँ होइनन्। यदि तपाइँ यस सम्बन्धमा राम्रो जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाइँ पूर्ण तुलना हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई विश्वास गर्न सक्ने ब्रान्डहरू को पूर्ण दृष्टि प्रदान गर्दछौं। तिनीहरू उस्तै हुन् जुन हामीले हाम्रो पृष्ठमा तुलना गर्छौं सस्तो ल्यापटप.
Windows 10 को ठूलो आगमन संग, ल्यापटपहरू फेरि बढ्दै छन्। तर यो सफलताको लागि यो मात्र कारण होइन, तिनीहरूले अल्ट्राबुकको लोकप्रियता र ल्यापटप र ट्याब्लेटको रूपमा सेवा गर्ने दुई-इन-वन हाइब्रिडहरूको वृद्धिलाई पनि प्रभाव पारेको छ। सस्तो ल्यापटपहरू HP Pavilion x2 जस्ता मोडेलहरूका लागि क्रोमबुकहरूमा ग्राउन्ड प्राप्त गर्दैछन्। यसैबीच, गेमहरू खेल्नको लागि पर्याप्त शक्ति भएका ल्यापटपहरूले पनि उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको देखिरहेका छन् र तिनीहरू सजिलैसँग हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरहरूको लागि राम्रो प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ।
यति धेरै विकल्पहरू उपलब्ध भएकाले, तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि उत्तम ल्यापटप छनोट गर्नु झन्झटिलो हुँदै गइरहेको छत्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि, सबै भन्दा पहिले, तपाईंले यसको साथ के गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ छिटो र सजिलैसँग तपाइँको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त ल्यापटप छनौट गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं यो वेब पृष्ठमा हेर्नुहोस्.
ती प्रयोगकर्ताहरू जो छिटो बुट टाइम र हल्का तौलको कम्प्युटर पछि जान्छन् किनभने तिनीहरू यससँग सार्न चाहन्छन्, अल्ट्राबुकको साथ पक्कै खुसी हुनेछन्।। अर्कोतर्फ, गेमरहरूले उनीहरूको माग गरिएको ग्राफिक्स र प्रशोधन आवश्यकताहरू अनुरूप ल्यापटपहरू छनौट गर्नेछन्, र लचिलोपन प्रदान गर्ने उपकरण चाहिनेहरूले दुई-इन-वन हाइब्रिडको लागि रोज्नेछन्।
सुरुमा, यो भारी लाग्न सक्छ - ती सबै विकल्पहरूसँग - तर हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईलाई जे भए पनि राम्रो ल्यापटप फेला पार्न मद्दत गर्नु हो। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् जब हामी तपाईंलाई भन्छौं कि तपाईंको लागि एक उत्तम ल्यापटप छ। यस गाइडको साथ, तपाईंले यसलाई फेला पार्नुहुनेछैन, तर तपाईं आफ्नो खरिदको 100% निश्चित हुनुहुनेछ।
ल्यापटप तुलना: अन्तिम परिणाम
हामीले गरेको मूल्याङ्कनले हामीलाई छनोट गर्न अगुवाइ गर्‍यो 10 ल्यापटपहरू मध्ये तीन विजेताहरू विश्लेषण गरियोयी तीन मोडेलहरू हुन् जुन हामीले यस ल्यापटप तुलनामा समावेश गर्दछौं।
El पहिलो वर्गीकृत, गोल्ड अवार्डको विजेता हो HP ईर्ष्या X360 de 13,3 इन्च। यो ल्यापटपमा शक्तिशाली Intel Core i7 प्रोसेसर र 256GB SSD - 512 GB मा विस्तार गर्न सकिने छ। थप रूपमा, यसले Windows 10 सँग काम गर्दछ,9घण्टा र 28 मिनेट सम्मको स्वायत्तता छ र केवल 1,3 kg तौल छ। यसको स्क्रिन उत्कृष्ट छ, 1920 x 1080 पिक्सेल र गतिमा 2560 x 1440 सम्मको रिजोल्युसनको साथ।
HP ईर्ष्या x360 13-ar0000ns ...
यो सत्य हो कि 13,3-इन्च साइजको बजारमा सबैभन्दा ठूलो स्क्रिन छैन, तर यसले यसको पोर्टेबिलिटीको साथ यसको लागि बनाउँछ। HP Specter x360 मा तीन USB 3.0 पोर्टहरू छन् जसले तपाईंलाई सबै USB बाह्य उपकरणहरूमा द्रुत पहुँच दिन्छ। यो ल्यापटप SD र HDMI कार्डहरूसँग उपयुक्त छ। निर्माताले अनलाइन फोन, च्याट र प्राविधिक सेवा, साथै सामाजिक सञ्जाल प्रदान गर्दछ।
El दोस्रो वर्गीकृत र रजत पुरस्कार को विजेता श्रृंखला हो Dell Inspiron 5570 de 15 इन्च। यस नोटबुकको प्रोसेसर स्पीड राम्रो छ, यसको आधारभूत प्रोसेसर, इन्टेल कोर i3,1 जस्तै, 3Ghz, यसले तपाईंलाई छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ। यस ल्यापटपको बारेमा धेरै आकर्षक के छ भने तपाईले ग्राफिक्स कार्डलाई AMD भिडियो कार्डमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई उच्च परिभाषा ग्राफिक्ससँग काम गर्न आवश्यक छ। हार्ड ड्राइभमा यसको 1.000 GB भण्डारण क्षमता पर्याप्त छ र तपाइँलाई तपाइँको मल्टिमिडिया फाइलहरु को लागी प्रशस्त ठाउँ दिन्छ।
DELL EMC7V75G 39,62 सेमी ...
अपरेटिङ सिस्टम, Windows 10, राम्रो काम गर्दछ। योसँग लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्री छ जुन ५ घण्टा ४५ मिनेटसम्म पुग्छ, सत्य यो हो कि यस पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ। Inspiron5हाम्रो विजेता भन्दा थोरै भारी छ, 45 kg, यो, आंशिक रूपमा, यसको 5570-इन्च स्क्रिनको कारण हो। HP Envy X2.2 जस्तै, जब हामीले Inspiron लाई ताप परीक्षणको अधीनमा राख्यौं, यसको तल्लो 15 डिग्री पुग्यो जुन हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं, यदि तपाईंले यसलाई आफ्नो काखमा राख्नुभयो भने असहज हुन्छ। आधारभूत स्क्रिन रिजोल्युसन 360 x 37.7 पिक्सेल हो, तर तपाईले यसलाई धेरै उच्च रिजोल्युसनमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, 1920 x 1080 - वा के समान छ,a4K प्रदर्शन। यसमा दुई USB 3.0 पोर्ट र एउटा USB 2.0 पोर्ट छ।
अन्तमा, तेस्रो स्थान र कांस्य पुरस्कारको विजेता हो Acer Swift5de 14 इन्च। यस मोडेलमा 3,4GHz को प्रोसेसर गति छ, यो श्रेणीको ल्यापटपको लागि एकदम ठूलो छ। A- को यसको समग्र मूल्याङ्कनको साथ, हाम्रो प्रदर्शन डेटाले यो पीसीलाई तेस्रो स्थानमा राख्ने प्रोसेसर होइन। आधारभूत मोडेलमा 256GB SSD छ र यसको अपरेटिङ सिस्टम Windows 10 हो।
Acer SF514-52T स्विफ्ट5-...
यसको औसत ब्याट्री जीवन7घण्टा र 36 मिनेट हो, जुन हामीले समीक्षा गरेका ल्यापटपहरूको औसत भन्दा कम छ। आधारभूत स्क्रिन रिजोल्युसन 1920 x 1080 पिक्सेल हो, तर यसलाई 2560 x 1440 मा अपग्रेड गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, Acer Aspire Swift मा दुई USB 3.0 पोर्ट र एउटा USB 2.0 पोर्ट छ।
तुलना सबैभन्दा प्रख्यात मोडेलहरूको हो, त्यसैले मोडेलहरू लगभग € 1.000 लागत। यदि तपाइँसँग कडा बजेट छ भने, हाम्रो तुलना हेर्नुहोस् गुणस्तर-मूल्य ल्यापटपहरू वा हाम्रो सस्तो ल्यापटप समीक्षा सस्तो फेला पार्न।
हाम्रो ल्यापटप तुलनाको साथ समाप्त गर्न, हामी ल्यापटपका विभिन्न प्रकारहरू के हुन् भनेर वर्णन गर्नेछौं यदि तपाईं प्रत्येक खण्डलाई अलि बढी विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्बन्धित लेखहरू छन्।
कुनै पनि अन्य प्रमुख खरीद संग जस्तै, जब तपाइँ अन्तिम यूरो गणना नभएसम्म ल्यापटप प्राप्त गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ। यो एक उपकरण हो जुन केहि वर्ष सम्म रहनेछ, त्यसैले हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँ कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि उत्तम ल्यापटपहरूको लागि हाम्रो गाइड हेर्नुहोस्।
केही वर्ष पहिले त्यहाँ ह्याङ्ग आउट गर्न ल्यापटप र काम गर्न ल्यापटप मात्र थिए। बरु आज, प्रत्येक श्रेणीको लागि धेरै विकल्पहरू। आधारभूत कुराहरूसँग सुरु गरौं:
यी ल्यापटपहरू मूल रूपमा हुन् यन्त्रहरू जसले पातलोपन, हल्कापन, शक्ति र आकारको निश्चित विशेषताहरू पूरा गर्नुपर्छ एप्पलको १३ इन्च म्याकबुक एयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वफादार विन्डोज ल्यापटप निर्माताहरूलाई मद्दत गर्ने प्रयासमा इन्टेल प्रोसेसरद्वारा सेट गरिएको हो।
अल्ट्राबुक ल्यापटपको लागि यस्तो रूपमा मार्केटिङ गर्नको लागि, यसले Intel द्वारा सेट गरिएका कठोर विशिष्टताहरू पूरा गर्नुपर्छ। यो पातलो हुनुपर्छ, यो 20-इन्च स्क्रिनहरूको लागि 13.3 मिमी वा 23-इन्च वा ठूला स्क्रिनहरूको लागि 14 मिमी भन्दा बाक्लो (बन्द हुँदा) हुन सक्दैन। थप रूपमा, यदि तपाइँ उच्च परिभाषा भिडियो प्ले गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको ब्याट्री जीवन छ घण्टा वा निष्क्रिय छ भने नौ घण्टा हुनुपर्छ।
यसमा एक नजर राख्नुहोस् सस्तो अल्ट्राबुक तुलना हामीसँग के छ
अल्ट्राबुकलाई हाइबरनेशनबाट बाहिर आउन तीन सेकेन्डभन्दा बढी समय लाग्दैन। यी ल्यापटपहरूमा सामान्यतया ठोस राज्य हार्ड ड्राइभहरू र आवाज आदेशहरू र टच स्क्रिनहरू जस्ता सुविधाहरू छन्। अल्ट्राबुकहरू पोर्टेबिलिटी र कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको हो, तर तिनीहरूको मूल्य बढी हुन्छ, सामान्यतया $ 900 बाट सुरु हुन्छ।
नतिजा केही आएको छ शीर्ष गुणस्तरको ल्यापटपहरू जसमा सबै भन्दा राम्रो एप्पल ल्यापटपहरूको ईर्ष्या गर्न केही छैन। अल्ट्राबुकहरू डेल XPS2वा Asus Zenbook जस्तै लामो ब्याट्री लाइफ र तीखो डिस्प्लेका साथ 13 सेन्टिमिटर बाक्लो ल्यापटपहरू हुन्।
लेनोवो योग 920-13IKB -...
Lenovo Yoga (2021) एक अचम्मको पातलो र हल्का ल्यापटप मात्र होइन, यो हो। डिजाइन स्तर मा बिल्कुल क्रान्तिकारी छ। 13,9 इन्चको स्क्रिनलाई 11 इन्चको फ्रेममा माउन्ट गर्नु कुनै सानो उपलब्धि होइन, तर लेनोभोले लगभग इन्फिनिटी एज बिना मोनिटर सिर्जना गर्ने चमत्कार पनि गरेको छ। योगा 910 पनि एक धेरै शक्तिशाली, असहज ल्यापटप हो जुन धेरै किफायती सिफारिस गरिएको मूल्य हो। यो सबैको लागि हामी यसलाई उत्कृष्ट अल्ट्राबुक मान्छौं।
गेमिङका लागि ल्यापटपहरू
गेमिङ ल्यापटप भनेको तपाईले सोचेकै कुरा हो - साँचो भिडियो गेम प्रशंसकहरूका लागि एउटा पीसी। छोटकरीमा, तिनीहरू क्यान्डी क्रश वा एंग्री बर्डहरू खेल्न प्रयोग गर्दैनन्, तर उच्च-अन्त प्रोसेसर, 8GB देखि 16GB RAM, न्यूनतम 1 TB भण्डारण र ग्राफिक्स कार्ड आवश्यक पर्ने साँच्चै भारी पीसी खेलहरू खेल्न प्रयोग गरिन्छ। जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। गेमिङका लागि ल्यापटपहरू सामान्यतया धेरै वर्गाकार हुन्छन् र तिनीहरूको निर्माण अन्य ल्यापटपहरू भन्दा बढी बलियो हुन्छ, र तिनीहरूको स्क्रिन सामान्यतया उच्च रिजोल्युसनको हुन्छ।
तपाईं हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो गेमिङ ल्यापटप को विश्लेषण.
गेमिङका लागि ल्यापटपहरू तिनीहरू पातलो वा हल्का हुनु पर्दैन, किनकि सामान्यतया खेलाडीहरूले डेस्कटप कम्प्युटरको सट्टा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन्। गेमिङ ल्यापटपले तपाइँलाई डेस्कटप कम्प्युटरको जस्तै खेलहरू खेल्न अनुमति दिन्छ, तर यो एक कोठाबाट अर्को कोठामा जान वा साथीको घरमा खेल्न पर्याप्त पोर्टेबल भएको फाइदाको साथ।
हालैका समयमा, गेमिङ ल्यापटपहरूले उनीहरूको डेस्कटप समकक्षहरूसँग समात्न प्रयास गर्दै अविश्वसनीय प्रगति गरेका छन्। यस अर्थमा, यस्तो देखिन्छ कि यो विकासको लागि सबैभन्दा तार्किक निष्कर्ष गेमिङ ल्यापटपहरूमा डेस्कटपका टुक्राहरू समावेश गर्न सुरु गर्नु हो। यो मोडेल ए अविश्वसनीय रूपमा शक्तिशाली 15,6-इन्च ल्यापटप, पूर्ण आकारको डेस्कटप प्रोसेसर र शीर्ष-अफ-द-लाइन मोबाइल GPU संग उपलब्ध। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो संयोजनले ठूलो ल्यापटप बनाउनेछ, तर यो सबैलाई एकदम सानो शरीरमा प्याक गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
विद्यार्थी र कामका लागि ल्यापटप
व्यापारिक ल्यापटपहरू अन्य लेखहरूमा छलफल गरिएका परम्परागत सामान्य उद्देश्यका ल्यापटपहरू जस्तै छन्, तर तिनीहरू हुन् उच्च गुणस्तरमा निर्मित, तिनीहरूका कम्पोनेन्टहरू अधिक टिकाउ हुन्छन् र सामान्यतया लामो र अधिक व्यापक वारेन्टीहरूसँग बेचिन्छन्। तपाईंले आफ्नो ल्यापटपलाई व्यापारको लागि प्रत्येक दुई वर्षमा बदल्नु पर्दैन किनभने यो म्याद सकिएको छ।
यस अवसरमा हामी सिफारिस गर्दछौं विद्यार्थी नोटबुक गाइड.
यी प्रकारका ल्यापटपहरू तिनीहरूको कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका छन्, क्वाड-कोर प्रोसेसरहरू जसले सजिलैसँग धेरै जटिल कार्यहरू एकैसाथ ह्यान्डल गर्न सक्छ किनभने तपाईंले कम्प्युटरलाई ढिलो नगरी आफ्नो कार्य पूरा गर्न आवश्यक सबै सफ्टवेयरहरू चलाउन सक्षम हुनुपर्दछ। यी ल्यापटपहरूमा सामान्यतया ठूला ग्राफिक्स कार्डहरू हुँदैनन्, तर यदि तपाईंको काममा ग्राफिक्स वा भिडियो सम्पादन समावेश छ भने तिनीहरू थप्न सकिन्छ।
HP Pavilion 14-ce2014ns धेरै तरिकामा MacBook Air जस्तै हुन सक्छ, तर यो धेरै तरिकामा राम्रो मेसिन हो। यो पातलो, हल्का, र एक तरीकाले यसको एल्युमिनियम बडीको लागि थप आकर्षक छ। साथै यस ल्यापटपमा ए उच्च रिजोल्युसन पूर्ण HD डिस्प्ले, एक Intel Core i7 CPU र 1TB भण्डारण HDD विकल्पको रूपमा। जे होस्, सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो कि तपाईले यो सबै लगभग 800 यूरोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईसँग विद्यार्थी बजेट छ भने यसलाई उत्कृष्ट ल्यापटपहरू मध्ये एक बनाउँदछ।
कामको लागि लगभग विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको, त्यसैले तिनीहरूको नाम, यी सामान्यतया बाक्लो नोटबुकहरूको दिमागमा एउटा मात्र कुरा हुन्छ: उत्पादकता। विक्रेताहरूले सामान्यतया यी एकाइहरूलाई व्यावसायिक-ग्रेड GPU हरू, जस्तै Nvidia Quadro श्रृंखला वा AMD FirePro लाइनहरू सुसज्जित गर्छन्।
यसका अन्य विशेषताहरू क अन्य मनोरन्जन ल्यापटपहरू भन्दा पोर्टहरूको फराकिलो विविधता र आन्तरिकहरूमा सजिलो पहुँच। ट्र्याकपोइन्ट कर्सरहरू, र फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरहरू जस्ता हार्डवेयर-स्तर सुरक्षा विकल्पहरू जस्ता थप लिगेसी इनपुटहरू उल्लेख नगर्नुहोस्। उदाहरणको रूपमा हामी लेनोभो थिंकप्याड X1 कार्बन र HP ZBook 14 उल्लेख गर्न सक्छौं।
Lenovo Ideapad 330, यसको अधोरेखित सौन्दर्यशास्त्र र टिकाउ, असभ्य डिजाइनको लागि धन्यवाद, यो मोबाइल वर्कस्टेशनबाट तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा हो। साथै, यसले पेशेवरहरूलाई उत्कृष्ट स्क्रिन रिजोल्युसन, लामो ब्याट्री जीवन, र बलियो, भरपर्दो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
यो 900 यूरो बाट खर्च हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यसले अफिस बाहिर काम गर्ने पेशेवरहरूलाई प्रदान गर्ने सबै चीजहरूको लागि त्यो अतिरिक्त तिर्न लायक छ।
दुई-मा-एक ल्यापटप (हाइब्रिड)
यदि तपाइँ ट्याब्लेटको साथ ल्यापटपको प्रयोग संयोजन गर्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव छ कि एक हाइब्रिड उपकरण तपाइँको लागि आदर्श हो। एक दोहोरो-प्रयोग अपरेटिङ सिस्टम, माइक्रोसफ्टको Windows 8 संग सक्षमयी यन्त्रहरू ट्याब्लेटको रूपमा हुन सक्छन् जसमा सामानहरू ल्यापटपको रूपमा कार्य गर्न संलग्न गर्न सकिन्छ, वा तिनीहरू ल्यापटपको रूपमा हुन सक्छन् जुन किबोर्डबाट अलग हुँदा ट्याब्लेटको रूपमा लिन्छ। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो तुलना यदि तपाइँ यी मोडेलहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने 2-in-1 परिवर्तनीय नोटबुकहरू।
अवश्य पनि, ट्याब्लेट र ल्यापटप दुवै रूपमा सफलतापूर्वक सेवा गर्न सक्ने उपकरण प्रदान गर्ने विचार होघर वरपर धेरै ग्याजेटहरू नहोस् भनेर। बजारमा यी उपकरणहरू परिचय गर्न सजिलो छैन, तर तिनीहरूको क्षमताको उज्ज्वल उदाहरण माइक्रोसफ्टको सतह प्रो3हो।
HP स्पेक्टर x360 ...
HP Specter x360 13 HP ब्रान्डको अहिलेसम्मको सबैभन्दा अचम्मको र बहुमुखी उपकरण मात्र होइन, यो हो। बजारमा सबैभन्दा आकर्षक हाइब्रिड ल्यापटप। वर्षौंको परिष्करण पछि, HP बाट यो नयाँ हाइब्रिड ट्याब्लेटले ठूलो स्क्रिन वा उच्च रिजोल्युसन जस्ता केही राम्रा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू पार गरेको छ। थप रूपमा, HP स्पेक्टरलाई धेरै स्थिर र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन केही साना तत्वहरू पुन: डिजाइन गरिएको छ, जस्तै काज वा कभरको प्रकार।
तपाईंले गेमिङ ल्यापटपलाई देख्ने बित्तिकै चिन्नुहुनेछ: ठूलो आकार, फ्ल्यासिङ लाइटहरू, ग्यारिस पेन्टिङहरू, र घुम्ने फ्यानहरू। तापनि पातलो, हल्का र अधिक सुरुचिपूर्ण मोडेलहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद, जस्तै Razer ब्लेड वा MSI GS60 Ghost Pro, यो प्रतिमान परिवर्तन हुन थालेको छ।.
थिच्दै यो लिंक तपाइँसँग खेल्नको लागि ल्यापटपहरूमा पूर्ण तुलना छ (गेमिङ)।
सामान्यतया, गेमिङ ल्यापटपहरू हुन् Nvidia र AMD बाट नवीनतम मोबाइल GPUs संग सुसज्जित नवीनतम खेलहरू खेल्न सक्षम हुनका साथै यदि तपाइँ डेस्कटप कम्प्युटरसँग खेल्नुभयो भने (त्यहाँ केही मोडेलहरू छन् जुन सीधै डेस्कटप कम्प्युटरलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्)।
सामान्य उद्देश्य ल्यापटपहरू
यो अन्तिम प्रकारको ल्यापटप वर्गीकरण गर्न गाह्रो छ। ती मेसिनहरू हुन् जसले अझै पनि ल्यापटप हुनु पर्ने दशकहरू पहिले सेट गरिएको मापदण्डहरू पालना गर्दछ, यद्यपि अझ परिष्कृत। ल्यापटप बजारले आफूलाई दिएको सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै, सामान्यतया यस वर्गमा भएकाहरूलाई सस्तो वा मध्य-दायरा कम्प्युटरहरू मानिन्छ.
यी ल्यापटपहरू 11 देखि 17 इन्चसम्म स्क्रिन साइजहरूमा दायरा हुन्छन् र सामान्यतया धेरै सुविधाहरू हुँदैनन् जुन तिनीहरूको सामान्यतया प्लास्टिकको आवरणहरू अन्तर्गत रहन्छन्। तिनीहरू कम्प्युटरहरू हुन् दैनिक कार्यहरू गर्न सक्षम तर तपाईसँग बढी माग भएका आवश्यकताहरू हुँदा तिनीहरू कम हुन्छन्। मलाई विश्वास छ यो इन्फोग्राफिक यसले तपाईंलाई ग्राफिक रूपमा सबै कुरा हेर्नको लागि थोरै मद्दत गर्नेछ।
सन् २०१४ मा १३ इन्चको म्याकबुक प्रो एप्पलले जारी गरेको सबैभन्दा राम्रो ल्यापटप थियो। 2021 मोडेल कुनै न कुनै रूपमा अझ छिटो छ र लामो ब्याट्री जीवन प्रदान गर्दछ। आन्तरिक अपडेट बाहेक, 2021 13-इन्च म्याकबुक प्रोले भर्खरै प्रस्तुत गरिएको फोर्स टच ट्र्याकप्याड इनहेरिट गरेको छ। सायद एप्पल यसको व्यापारिक अनुप्रयोगहरूको लागि बाहिर खडा छैन, तर म्याक पाउनु धेरै आकर्षक छ यदि तपाइँ खातामा सफ्टवेयर र यसको अद्यावधिकहरू लिनुहुन्छ भने।
Chromebooks बजारमा सबैभन्दा सानो र हल्का ल्यापटपहरू मध्ये एक होतर तिनीहरूसँग परम्परागत नोटबुकको शक्ति र भण्डारण क्षमताको कमी छ। Windows वा Macintosh अपरेटिङ सिस्टमको सट्टा, क्रोमबुकहरू गुगलको क्रोम ओएसमा चल्छन्, विशेष गरी इन्टरनेट ब्राउज गर्न र अरू थोरैको लागि डिजाइन गरिएको। सामान्यतया तिनीहरूको हार्ड ड्राइभ धेरै सानो हुन्छ - लगभग 16GB - स्क्रिन सामान्यतया 11 इन्चको हुन्छ, र तिनीहरूसँग सामान्यतया एउटा USB पोर्ट हुन्छ।
हामीसँग पूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण छ उत्कृष्ट सानो ल्यापटपको रूपमा Chromebooks.
यद्यपि, तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो हार्ड ड्राइभको सट्टा Google ड्राइभमा फोटो, भिडियो र अन्य कागजातहरू भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ।। यसको स्क्रिन रिजोल्युसन सामान्यतया 1366 x 768 पिक्सेल हुन्छ, जुन इन्टरनेट सर्फ गर्न र समय समयमा चलचित्र हेर्न पर्याप्त छ। साथै, जडान बढाउनको लागि तपाइँ सधैं USB को सेट जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
नतिजा एउटा प्रणाली हो जुन कम-अन्त हार्डवेयरमा चल्न सक्छ, Chromebooks बनाउँछ तंग बजेट वा विद्यार्थीहरूको लागि आदर्श। निस्सन्देह, वायरलेस इन्टरनेट पहुँच भएको क्षेत्रमा Chromebooks ले राम्रो काम गर्छ, तर Google ले हालै यसको अफलाइन कार्यक्षमता बढाउँदै लगेको छ। तिनीहरू कस्तो छन् भन्ने बारे एक विचार प्राप्त गर्न, तपाईंले डेल क्रोमबुक 11 वा तोशिबा क्रोमबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
नेटबुकहरू क्रोमबुकहरू जस्तै छन् किनभने तिनीहरू धेरै सानो, सस्तो, र वेब ब्राउजिङका लागि अनुकूलित छन् र अरू थोरै छन्। यी नोटबुक कम्प्युटरहरूमा डीभिडी र सीडीहरू प्ले गर्नको लागि अप्टिकल ड्राइभ छैन। तर तैपनि, Chromebooks को विपरीत, नेटबुकहरू सामान्यतया Windows अपरेटिङ सिस्टममा चल्छन्, या त अन्तिम वा पहिले, जससँग धेरै प्रयोगकर्ताहरू परिचित छन्।
थिच्न सक्नुहुन्छ यहाँ उत्तम सस्तो नेटबुकहरू हेर्नको लागि.
यसबाहेक, धेरै नेटबुकहरू, तिनीहरूको छुट्याउन मिल्ने टचस्क्रिन र किबोर्डहरू, ल्यापटप र ट्याब्लेटहरू बीचको सीमामा छन्। खेल खेल्नको लागि एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्न मन पराउनेहरूका लागि नेटबुक एउटा उत्कृष्ट ल्यापटप हो, तर भौतिक किबोर्डबाट टाइप गर्न रुचाउँछ।
राम्रो सानो वा ठूलो?
जे भए पनि तिनीहरूको श्रेणी, ल्यापटप तिनीहरू सामान्यतया 11-17 इन्च आकारमा हुन्छन्। कुन साइजको ल्यापटप किन्ने भन्ने बारे तपाईंको निर्णय यी दुई कारकहरूमा आधारित हुनुपर्छ: तौल र स्क्रिनको साइज।
सबैभन्दा पहिले, तपाइँको ल्यापटप स्क्रिनको साइजले प्रत्यक्ष रूपमा यसले प्रदर्शन गर्न सक्ने सामग्रीको मात्रा र यसको आकारलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ। यद्यपि, तपाईंले यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ कि, स्क्रिन साइज बढ्दै जाँदा, रिजोलुसन पनि बढ्नुपर्छ। तपाईंले 1366 देखि 768-इन्च ल्यापटपहरूको लागि 10 x 13 को रिजोल्युसन, वा 1920 देखि 1080-इन्च ल्यापटपहरूको लागि 17 x 18 भन्दा कम कुनै पनि कुरा स्वीकार गर्नु हुँदैन।
दोस्रो, तपाईंले यो दिमागमा राख्नु पर्छ तपाईंले बढाउनुभएको प्रत्येक इन्च स्क्रिनको लागि, ल्यापटपको तौल लगभग ०.४५ किलोले बढ्नेछ।। निस्सन्देह, त्यहाँ अपवादहरू छन्, त्यहाँ हल्का र पातलो मोडेलहरू छन् जसले यो प्रवृत्ति तोड्छ। हुनसक्छ तपाइँ बजारमा सबैभन्दा तेज र सबैभन्दा ठूलो स्क्रिन चाहनुहुन्छ, तर तपाइँ यसलाई तपाइँको ब्याकप्याकमा बोक्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
तपाईंले कुन सुविधाहरू खोज्नुपर्छ?
धेरैजसो प्राविधिक ग्याजेटहरू जस्तै, ल्यापटपहरू प्रायः धेरै सुविधाहरूको साथ आउँछन् जुन तपाईंलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा आवश्यक हुन सक्छ वा नहुन सक्छ। तल सूचीबद्ध गरिएका सुविधाहरू अनिवार्य-अवश्यकताहरू हुन्, जुन तपाईंले आफ्नो ल्यापटप किन्दा खोज्नुपर्छ।
USB 3.0- यो USB डाटा ट्रान्सफर टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा नयाँ मानक हो। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ल्यापटपमा यी पोर्टहरू मध्ये कम्तिमा एउटा छ ताकि तपाईंको ल्यापटप र उदाहरणका लागि, USB 3.0 फ्ल्याश ड्राइभको बीचमा फाइल स्थानान्तरण छिटो हुन्छ।
802.11ac वाइफाइ- अहिलेसम्म 802.11n सबैभन्दा छिटो वायरलेस इन्टरनेट जडान थियो, तर गत वर्ष 802.11ac राउटरहरू देखा परेका छन्। यदि तपाइँ तपाइँको ल्यापटप स्ट्रिमिङ भिडियोहरू हेर्न वा ठूलो संख्यामा फाइलहरू र सामग्री डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँले त्यस प्रकारको Wi-Fi जडानको साथ मोडेल छनौट गर्न गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
SD कार्ड रिडर- स्न्यापशटहरू लिनको लागि स्मार्टफोन क्यामेराको लोकप्रियता संग, धेरै ल्यापटप निर्माताहरूले आफ्नो मोडेलबाट यो सुविधा हटाउन सुरु गरेका छन्, यद्यपि, यदि तपाईं फोटोग्राफी उत्साही हुनुहुन्छ भने, तपाईंले SD कार्ड रिडर गुमाउन सक्नुहुन्छ।
टच स्क्रीनजबकि ल्यापटपमा टचस्क्रिनको गुणहरू अहिलेको लागि शंकास्पद छन्, हामीलाई थाहा छैन भविष्यले के ल्याउनेछ। यद्यपि, यो एक विशेषता हो जसले सेटलाई महँगो बनाउन सक्छ, त्यसैले निर्णय गर्नु अघि यो उपयोगी हुनेछ कि भनेर राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुहोस्।
प्रश्नहरू खरिद गर्नु अघि आफैलाई सोध्न
राम्रो देखिने ल्यापटप किन्न हतार गर्नु अघि, तपाईंले आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई कुन प्रकारको ल्यापटप तपाईंको लागि उत्तम छ भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाई मुख्यतया ल्यापटप के को लागी प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
यदि तपाइँ यसलाई इन्टरनेट सर्फ गर्न, स्ट्रिमिङ भिडियोहरू हेर्न र परिवारसँग समय समयमा भिडियो कलहरू गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा तपाइँसँग सामान्य वा आर्थिक प्रयोगको लागि कम्प्युटरको साथ पर्याप्त हुनेछ। तपाइँ खेल्न मनपर्छ? त्यहाँ तपाईंसँग जवाफ छ। तपाईं धेरै हिँड्नुहुन्छ र तपाईंलाई पातलो र हल्का ल्यापटप चाहिन्छ, एक अल्ट्राबुक प्रयास गर्नुहोस्। यस प्रश्नको जवाफले तपाईंलाई सधैं सही दिशामा देखाउनेछ।
डिजाइनमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
त्यहाँ सबै आकारका ल्यापटपहरू छन्, ब्रान्डहरू, मोडेल र आकारहरू - पेन्ट वा सामग्रीको तहहरू उल्लेख नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको वरिपरि देख्नुहुने ल्यापटपहरूको कुरूप डिजाइनमा ठट्टा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सायद केवल एक एल्युमिनियम केस भएको कम्प्युटर चाहानुहुन्छ, वा कम्तिमा सफ्ट-टच प्लास्टिक चाहानुहुन्छ। तर सावधान, डिजाइन सामान्यतया महँगो छ।
तपाईं कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ वा खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
अन्तमा, कुन ल्यापटप किन्ने भन्ने निर्णय गर्दा यो तपाईंको मुख्य ब्यारोमिटर हुनुपर्छ, तपाईंले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन। तपाईको बजेटले तपाईले कुन श्रेणीको ल्यापटप किन्नु हुन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ।
सस्तो ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाई कति खर्च गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस्
र हामी तपाईंलाई उत्तम विकल्पहरू देखाउँछौं
हामीले के मूल्याङ्कन गरेका छौं?
तपाईंले यो महसुस नगर्नु भएको हुन सक्छ, तर ल्यापटप हामीसँग 30 वर्षको लागि रहेको छ, यद्यपि यसको प्रारम्भिक दिनहरूमा यो एक दिखावा टाइपराइटर भन्दा अलि बढी थियो। दशकौंसम्म, परम्परागत डेस्कटप कम्प्युटरहरूले कम मूल्यमा बढी कम्प्युटिङ पावर, ठूलो भण्डारण क्षमता, र राम्रो मोनिटरहरू उपलब्ध गराए। XNUMX को मध्यमा, डेस्कटप कम्प्युटर हुनु सामान्य थियो, तर केही परिवारहरूले ल्यापटप हुनुको फाइदाहरू देख्न थाले।
समयको साथ, इन्टरनेट डायल-अप मोडेमबाट वायरलेस राउटरहरूमा विकसित भएको छ जुन हामीसँग हाल छ र, समानान्तरमा, ल्यापटपहरू प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सुधार भइरहेको छ जसलाई तिनीहरूको कम्प्युटरसँग सार्न आवश्यक छ। कुनै समय व्यापारी, बैंकर र सेनाका लागि ग्याजेट थियो, आज यो सबैका लागि आवश्यक उपकरण भएको छ।
पोर्टेबिलिटी ल्यापटपको मुख्य मूल्य भएको हुनाले कुन कम्प्युटर किन्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्दा यसको साइज र तौलमा ध्यान दिनुपर्छ।, यसको प्रोसेसर र यसको मेमोरी क्षमता बिर्सन बिना। यद्यपि आधुनिक ल्यापटपको तौल पुरानो ल्यापटपहरू जस्तै9किलो भन्दा बढी छैन, तपाईले अझै पनि 2.72 किलोग्राम मोडेल र 1.84 वटा बीचको भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ र तपाइँ आफ्नो ल्यापटपलाई कक्षामा लैजाने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँले यसलाई ब्याकप्याक वा झोलामा ढुवानी गर्नुपर्नेछ र तपाइँ पक्कै पनि यो सानो, हल्का मोडेल हो भनेर प्रशंसा गर्नुहुनेछ। तर, अर्कोतर्फ, यदि तपाईं साउन्ड इन्जिनियर हुनुहुन्छ र तपाईंले म्युजिक ब्यान्डको लाइभ कन्सर्ट रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरलाई सकेसम्म शक्तिशाली हुन के भन्नुहुनेछ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका ल्यापटपहरू छन्। तपाईंले आधारभूत ल्यापटपमा केही सय युरो वा उच्च-अन्त गेमिङ ल्यापटपमा धेरै हजार खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। केहि संग तपाईं इन्टरनेट सर्फ गर्न र इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ, जबकि अन्य कुनै समस्या बिना भिडियो र फोटो सम्पादन कार्यक्रम चलाउन सक्षम छन्। तपाईले रोज्नु भएको ल्यापटपको प्रकार तपाईले यससँग गर्न योजना गर्नुभएका कार्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। के तपाईंलाई यो काम गर्न आवश्यक छ? के तपाइँ यसमा चलचित्रहरू वा तपाइँको मनपर्ने टिभी कार्यक्रमहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाइँ एक रचनात्मक व्यक्ति हुनुहुन्छ वा तपाइँ भिडियो गेमहरूको शौकीन हुनुहुन्छ? यस ल्यापटपको तुलनामा हामीले बजारमा उत्कृष्ट मोडेलहरूको मूल्याङ्कन गरेका छौं। यदि तपाईं गहिरो जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ल्यापटपमा हाम्रा लेखहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
यो तुलनामा सबै भन्दा राम्रो ल्यापटप के हो?
यस प्रश्नको जवाफ सरल छैन र हामीले हाम्रो तालिकामा राखेका ल्यापटपहरूसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। सबै भन्दा राम्रो ल्यापटप त्यो हो जुन तपाईले खोजिरहनु भएको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र त्यो अर्को व्यक्तिसँग मेल खानु पर्दैन।
जब तपाइँ बजारमा सबै भन्दा हल्का ल्यापटपको साथ यात्रा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्को प्रयोगकर्ताले यसको विपरीत खोजिरहेको हुन सक्छ।
यस कारणको लागि, हाम्रो ल्यापटप तुलनामा हामीले सबै दर्शकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास गरेका छौं, यसको गुणस्तर मूल्यको सम्बन्धमा प्रत्येक खण्डमा उत्कृष्ट मोडेलमा शर्त लगाउँदै।
यदि तपाईलाई थाहा छैन कुन कम्प्यूटर किन्ने हो भने, हामीलाई टिप्पणी दिनुहोस् र हामी तपाईलाई तपाईको आवश्यकता अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त छनोट गर्न मद्दत गर्नेछौं।
तपाईको लागि आदर्श ल्यापटप तपाईको आवश्यकता के हो भन्नेमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनेछ, के को लागी तपाई यसलाई प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो कारणले गर्दा यो सूची मूल्य द्वारा क्रमबद्ध छ र "गुणवत्ता" द्वारा होइन।
यदि तपाइँ छिटपुट रूपमा प्रयोग गर्नको लागि ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ (जस्तै तपाइँको इमेल जाँच गर्न, वेब सर्फ गर्न, तपाइँको सामाजिक सञ्जाल अपडेट गर्न, फोटो सम्पादन गर्न, नेटफ्लिक्स हेर्न वा माइक्रोसफ्ट अफिस वा गुगल कागजात संग केहि काम गर्न को लागी, Chromebook को साथ तनाव नगर्नुहोस्। ), म तपाईंलाई Chromebook मा विचार गर्न सिफारिस गर्छु। शीर्षमा भएकाहरूलाई हेर्नुहोस् यस गाइड को। यदि त्यसको साथमा पनि, तपाइँ Windows ल्यापटप किन्नमा जोड दिनुहुन्छ, वा तपाइँलाई केहि थप शक्तिशाली चाहिन्छ भने, तपाइँ हामीले सुरुमा सिफारिस गरेको कम्प्यूटरहरू मध्ये एउटा रोज्न सक्नुहुन्छ।
यस एउटै लेखमा तपाईंले पैसाको लागि उत्तम मूल्य भएकाहरू फेला पार्नुहुनेछ। साथै यदि तपाईंले नेभिगेसन मेनु र अन्य प्रयोग गरेर वेब वरिपरि अलिकति हेर्नुभयो भने तपाईंले किन्न चाहनु भएको ल्यापटपको प्रकारमा निर्भर गर्दै हामीसँग तुलनाहरू र थप विशिष्ट लेखहरू पनि छन् भनी देख्नुहुनेछ। तपाईं उत्कृष्ट गेमिङ ल्यापटपहरू (गेमिङका लागि), वा कामको लागि उत्तम ल्यापटप आदि हेर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईले सूचीबाट देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईसँग पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनेछु। तपाईंले तल फेला पार्नुहुने सबै ल्यापटपहरू विन्डोज कम्प्युटरहरू हुन्। र, निष्पक्ष हुनको लागि, मैले विन्डोज मोडेलहरू थपेको छु जुन म कम्तिमा पनि घृणा गर्छु। यो होइन कि विन्डोज ल्यापटपहरू खराब छन्, तर म सामान्यतया Chromebook प्रयोग गर्छु जुन समान कार्यहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र, सामान्यतया, तिनीहरू सस्तो छन् (तपाईंले देख्नुभयो)। यो नभनी जान्छ कि एप्पल म्याकबुकको यस गाइडमा कुनै ठाउँ छैन 🙂
1 उत्तम सस्तो ल्यापटप
1.1 सस्तो ल्यापटपमा आजको डिलहरू
1.2.1 मूल्य अनुसार ल्यापटप
1.2.2 प्रोसेसर द्वारा ल्यापटप
1.2.3 प्रकार अनुसार ल्यापटप
1.2.4 ब्रान्ड द्वारा ल्यापटप
1.2.5 स्क्रिन अनुसार ल्यापटप
1.2.6 ल्यापटपलाई तपाईले चाहानु भएको प्रयोग अनुसार दिनुहोला
1.3 २०२१ को उत्कृष्ट सस्तो ल्यापटपहरू
1.3.1 CHUWI हीरोबुक
1.3.2 लेनोभो S145
1.3.3 ASUS VivoBook 15,6 इन्च HD
1.3.5 लेनोभो Ideapad 530
1.4 तिनीहरूको प्रयोग अनुसार सबैभन्दा सस्तो ल्यापटपहरू
1.5 खरिद गर्नु अघि सिफारिसहरू
1.6 ल्यापटप तुलना: अन्तिम परिणाम
1.7 ल्यापटपका प्रकारहरू
1.7.2 गेमिङका लागि ल्यापटपहरू
1.7.3 विद्यार्थी र कामका लागि ल्यापटप
1.7.4 कार्य स्टेशनहरू
1.7.5 दुई-मा-एक ल्यापटप (हाइब्रिड)
1.7.6 गेमि lapt ल्यापटपहरू
1.7.7 सामान्य उद्देश्य ल्यापटपहरू
1.7.8 Chromebook हरु
1.8 राम्रो सानो वा ठूलो?
1.9 तपाईंले कुन सुविधाहरू खोज्नुपर्छ?
1.10 प्रश्नहरू खरिद गर्नु अघि आफैलाई सोध्न
1.10.1 तपाई मुख्यतया ल्यापटप के को लागी प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
1.10.2 डिजाइनमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
1.10.3 तपाईं कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ वा खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
1.11 हामीले के मूल्याङ्कन गरेका छौं?
1.12 यो तुलनामा सबै भन्दा राम्रो ल्यापटप के हो?
1.13 अन्तिम निष्कर्ष
तपाईलाई रुचि छ
कालो शुक्रबार ल्यापटपहरू
ब्ल्याक फ्राइडे गेमिङ ल्यापटपहरू
साइबर सोमबार ल्यापटपहरू
सस्तो ल्यापटप 2022 - गोपनीयता नीति - कुकीहरूको बारेमा जानकारी - सम्पर्क